Nnwom 44 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Mpaebɔ a wɔde hwehwɛ mmoa
“Wo na wugyee yɛn” (7)
Yɛte sɛ “nguan a wɔrekokum wɔn” (22)
“Sɔre na yɛ yɛn boafo!” (26)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Kora mma dwom.+ Maskil.* 44 O Onyankopɔn, yɛde yɛn ankasa aso ate,Yɛn agyanom aka akyerɛ yɛn,+Nnwuma a woyɛe wɔ wɔn bere soWɔ tete mmere mu no. 2 Wode wo nsa pam amanaman,+Na wode yɛn agyanom kɔtenaa hɔ.+ Womaa amanaman no dii nkogu, na wopam wɔn fii hɔ.+ 3 Ɛnyɛ wɔn ankasa sekan na wɔde nyaa asaase no,+Na ɛnyɛ wɔn ankasa basa na egyee wɔn;+ Mmom ɛyɛ wo nsa nifa ne wo basa+ ne w’anim hann,Efisɛ na wopɛ wɔn asɛm.+ 4 O Onyankopɔn, wone me Hene;+Ma* Yakob nni nkonim korakora.* 5 Yɛnam wo tumi so bɛpam yɛn atamfo;+Ahotoso a yɛwɔ wɔ wo din mu nti, yebetiatia wɔn a wɔsɔre tia yɛn no so,+ 6 Efisɛ ɛnyɛ m’agyan na mede me ho to so,Na me sekan rentumi nnye me.+ 7 Wo na wugyee yɛn fii yɛn atamfo nsam;+Wo na womaa wɔn a wɔtan yɛn no anim guu ase. 8 Onyankopɔn na yebeyi no ayɛ daa nyinaa,Na yɛbɛkamfo wo din daa daa. (Sela) 9 Nanso afei de, woatow yɛn akyene na woama yɛn anim agu ase,Na wonka yɛn asraafo ho nkɔ bio. 10 Woma yeguan fi yɛn atamfo anim;+Wɔn a wɔtan yɛn no, wɔfa biribiara a wɔpɛ. 11 Wode yɛn hyɛ yɛn atamfo nsa sɛ wonkum yɛn sɛ nguan;Woabɔ yɛn ahwete amanaman mu.+ 12 Wotɔn wo nkurɔfo fofoofow,+Na wunnya mfaso biara.* 13 Woama yɛn anim agu ase wɔ wɔn a wɔtete bɛn yɛn no anim;Wɔn a wɔatwa yɛn ho ahyia nyinaa di yɛn ho fɛw, na wɔhwɛ yɛn serew. 14 Woama aman no anya yɛn retweetwee yɛn,*+Na yɛn nti, nkurɔfo wosowosow wɔn ti. 15 Daa nyinaa m’anim gu ase,Na aniwu amene me, 16 Esiane wɔn nne a wɔde twa me adapaa ne nsɛmmɔne a wɔka tia me nti;Esiane yɛn tamfo a ɔretua yɛn so ka nti. 17 Eyinom nyinaa aba yɛn so, nanso yɛn werɛ mfii wo,Na yemmuu w’apam so.+ 18 Yɛn koma nnyaee w’akyi di;Yɛn anammɔn nso mman mfii wo kwan so. 19 Nanso woabubu yɛn pasaa wɔ sakraman tenabea;Wode sum kabii akata yɛn so. 20 Sɛ yɛn werɛ afi yɛn Nyankopɔn dinAnaasɛ yɛatrɛw yɛn nsam abɔ onyame foforo bi mpae a, 21 Anka Onyankopɔn renhu anaa? Onim koma mu ahintasɛm.+ 22 Wo nti wokum yɛn daa nyinaa;Wobu yɛn sɛ nguan a wɔrekokum wɔn.+ 23 O Yehowa, Sɔre. Dɛn nti na woada?+ Nyan, na ntow yɛn nkyene afebɔɔ.+ 24 Adɛn nti na wode w’anim ahintaw? Adɛn nti na wo werɛ afi amanehunu ne nhyɛso a ɛba yɛn so no? 25 Wɔabrɛ yɛn* ase ama yɛaba fam sɛ mfuturu;Wɔaka yɛn nipadua atim fam.+ 26 Sɔre na yɛ yɛn boafo!+ Wo dɔ a enni huammɔ nti gye yɛn.+
^ Anaa “Hyɛ ma.”
^ Anaa “nnya nkwagye kɛse.”
^ Anaa “womfa wɔn nnye aboɔden.”
^ Nt., “de yɛn ayɛ akasabebu.”
^ Anaa “yɛn kra.”